Apple patents zano idzva reApple Penzura ine yekubata sensor | IPhone nhau
Apple patents zano idzva reApple Penzura ine yekubata sensor
Alejandro Cabrera | | Noticias, Apple zvigadzirwa
Apple yaisa mapepa akati wandei anogona kutipa tarisiro mune ramangwana reApple Penzura. mabvazuva chinyoreso chitsva chakashongedzerwa nema sensors ekubata inoona mitezo yakasiyana uye inopa nzira nyowani dzekudyidzana nemidziyo yakadai seiyo iPad.
Iyo patent application, yakanzi "Stylus ine touch sensor," yakaburitswa neUS Patent uye Trademark Hofisi svondo rino. Mariri, Apple inotsanangura a nyowani smart peni iyo inoratidzira mizhinji ye capacitive touch sensors kugonesa mashandiro matsva.
Ruzivo rwunounganidzwa ne sensors aya anogona kushandurwa kupinda chidzitiro inowanikwa chidhiraivho. Semuenzaniso, kana mushandisi akatenderedza chinyoreso, kufamba kumwe chete kunogona kuiswa kuchinhu chiri pachiratidziri, senge vector mune yekugadzirisa mufananidzo application.
"Sisitimu iyi inokwanisa kugadzirisa zvese kubata-bata uye kuwanda-kubata, izvo zvinogona kushandiswa kushandura zvinhu pachiratidziri." "Kuiswa kweminwe kunovhura musuwo wekubatana kwekushandisa kwepamberi."
Kusveta chigunwe kumusoro uye pasi pachinyoreso kunogona zvakare kubvumira vashandisi kupururudza kuburikidza newebhu peji kana gwaro, nepo 'kubhenekera' chiratidzo kunogona kutanga inertial scrolling kana kumisikidza iyo yekudhonza yekudzokorora ficha mune zvinoshandiswa seTwitter.
Apple inotsanangurawo sei simba maseru anokwanisa kushandiswa kunyangwe zvakanyanya kushanda. Semuenzaniso, kubata zvakasimba peni yekudhirowa kunogona kuwedzera iko iko iko, kana kuchimanikidza kunogona kuchinja mabhatani chaiwo. Imwe pombi inogona kubvumira vashandisi kusarudza zvinhu pachiratidziri.
Mune Apple yechipiri patent, yakanzi "Midziyo yemagetsi ine mawoko ekuona ruoko," kambani inofumura imwe system inoshandisa bata sensors kuti uone kana mushandisi akabata mudziyo kunge iyo iPhone kuruboshwe kana kurudyi ruoko.
Neruzivo urwu, chishandiso chinogona kuzopa tsika yemushandisi interface kuti ienzane neumwe-ruoko kushandiswa. Iwe unogona zvakare kuona kuti mabhatani akajairika anoonekwa padivi chaipo pechidzitiro kuti zvive nyore kuwana nechigumwe chako. Izvi zvingave zvinonyanya kunakidza nemahombekombe makuru seiyo iPhone 6s Plus.
Ehe saizvozvo, Apple patents haisi vimbiso yezvinhu zvinouya. Zvisinei, zviri pachena kuti Apple iri kushanda, zvirinani, kuita iyo Apple Penzura chimwe chinhu chakakura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple patents zano idzva reApple Penzura ine yekubata sensor
Iyo inofungidzirwa mitengo yeiyo iPhone 7 inosvinwa